I Rogers Igama Igama kunye neNtsapho Yomlando
Lithetha ntoni igama elidlulileyo iRogers?
URogers ngumnxeba wegama elibizwa ngokuba nguRoger, kwaye lithetha "unyana kaRoger." Igama elinikeziweyo elithi Roger lithetha "umkhonto odumileyo," ovela kwiiJamani ezihlaziyiweyo , ezithetha "udumo" kunye ne " ger ".
URogers usenokuba yindlela yanamhlanje yegama lesi-Irish elidala elithi "O'Ruadhraigh."
URogers ngu- 61 igama elidumileyo e-United States kunye ne- 77 yeyona nkcukacha ngokuqhelekileyo eNgilani.
Igama elithile Igama lokuchazwa : I- ROGER, ABASEBENZI, UROGERSON, RODGERSON, ROGARS
Abantu abaPhezulu abanegama le-ROGERS Name
UFred Rogers - umkhosi we-TV show, uMnu Rogers 'Neighborhood, elaliqhutywe kwi-PBS ukususela ngo-1968 ukuya ku-2001
U-Kenny Rogers- waseMerika owongoma umculi / umbhali wengoma
URoy Rogers - umculi waseMerika kunye nomculi
Ngaba i-Rogers- American humorist, umdlali kunye nomlobi
UKarl Rogers - isazi sengqondo seMerika; enye yooyihlo abasungula uphando lwe-psychotherapy
Kuphi i-ROGERS Igama lomninzi kakhulu?
Inombolo ye Rogers yingu-946 yeyona nto idlulileyo igama elidlulileyo kwihlabathi, ngokubhekiselele kwingcaciso yokuhanjiswa kwegama kwi-Forebears. Eyona nto ixhaphake kakhulu eUnited States, apho i-58, kodwa nayo iyinombolo eqhelekileyo eWales (35), e-Australia (81) nase-England (85th).
I-WorldNames PublicProfiler ibonisa ukuba igama leRogers liqhelekile kwiWales, ngokukodwa kwindawo yaseWrexham, nakwi-Australia, eNew Zealand naseNorth East e-Ireland.
E-United States, iRogers ithandwa kakhulu kwimzantsi-mpuma, ngokukodwa eMzantsi Carolina nase-Arkansas, kunye nakwimeko yase-New England yaseVermont.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name ROGERS
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjengokwentsapho yaseRogers okanye ingubo yeengalo kwifayile yeRogers.
Project ROGERS DNA
Joyina amanqaku abantu ngabanye ngegama likaRogers, kunye neentlobo ezinjengeDodgers, abanomdla ekusebenzisaneni kunye nokufumana ifa lemveli ngokuhlolwa kwe-DNA nokwabelana ngolwazi.
I-ROGERS I-Family Genealogy Forum
Ibhodi lemiyalezo yamahhala igxile kwinzala kaRogers okhokho emhlabeni jikelele. Khangela iforamu yezikhundla malunga nookhokho bakho baseRogers, okanye ujoyine iforum kwaye uphawule imibuzo yakho.
Uhlobo loSapho - I-ROGERS Genealogy
Phonononga ngaphezu kwezigidi ezi-7.6 ezivela kwiirekhodi zembali kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca enxulumene nomnxeba weRogers kule webhsayithi yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
I-ROGERS Igama lomnxeba
Uluhlu lokuposa lwamahhala lwabaphandi begama le-Rogers kunye nokuhluka kwalo kubandakanya iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neenkcukacha zokungcebeleka zemiyalezo edlulileyo.
I-GeneaNet - iRegers Records
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho, kunye nezinye izibonelelo kubantu abanomnxeba weRogers, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
I-Rogers Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye neembali zabantu ngabanye abanegama leRogers kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
Ancestry.com: Rogers Igama
Hlola ngaphezulu kwezigidi ezigidi ezili-13 ezirekhodiweyo kunye neenkcukacha zeenkcukacha, kubandakanywa iirekhodi zolwazi, uluhlu lwabagibeli, iirekhodi zomkhosi, izithuthi zomhlaba, i-probates, iintando kunye nezinye iirekhodi zegama le-Rogers kwi-website enokubhalisa, i-Ancestry.com.
I-HUGHES - Name Name & Origin
Imifanekiso kaRonald Reagan
Umthi weTrunk Biology - Ulwakhiwo lweThuthi oluSisiseko
Ukuchaza 'i-Uglies' Golf Bet (Ikwabizwa nangokuthi 'i-Nasties')
Imfazwe yesiBini yesiBili: iMfazwe yasePaardeberg
Izakhiwo zeMichiza eziqala ngeNcwadi I
Ngaba i-Scientology inkolo?